Nayakhabar.com: भारत भ्रमणका बेला किन रातारात हिट भइन प्रधानमन्त्री पत्नी सिता दाहाल ?
भारत भ्रमणका बेला किन रातारात हिट भइन प्रधानमन्त्री पत्नी सिता दाहाल ?
काठमाडौँ । भारतीय राष्ट्रपति भवनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हात मिलाइरहँदा प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको पोजिसनुको आलोचना भएको छ।
गार्ड अफ अनर ग्रहण गर्ने क्रममा पधानमन्त्री र उनकी पत्नीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वागत गरेका थिए। स्वागतकै क्रममा सीताको पोजिसन चेन्ज भयो जसका कारण सीताले आलोचना खेप्नु परेको छ।
कसरी पोजिसन चेन्ज भयो सीताको
दिल्लीमा रहेका पत्रकार सविन धमलाका अनुसार भारतीय राष्ट्रपति भवनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सीता नेपाली झण्डा फहराउँदै आइपुगे। उनीहरुलाई केही समयदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री पर्खिराखेका थिए। जब गाडी रोकियो, दाहिने तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झरे र मोदीसँग हात मिलाए।
प्रधानमन्त्री पत्नी सीता गाडीको देब्रेतर्फबाट बाहिरिइन् र गाडीको पछाडिको भागबाट आएर मोदीलाई भेटिन्। मोदीले नमस्कार गर्दैगर्दा प्रचण्ड पत्नी सीताले भने हात दिइन्। दुवैले हात मिलाए।
त्यसपछि मोदी र प्रचण्डबीच कुराकानी भयो। राष्ट्रपति भवनमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुले फोटो खिच्न सहजता प्रदान गर्न सीतालाई आग्रह गरे। मोदीले पनि हातले सीतालाई इशारा गरे। तर प्रधानमन्त्री पत्नी सीताले इशारा बुझिनन् र उनी मोदीको तर्फ बढिन्। उनी अगाडिबाट हटेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साइडमा उभिनुको साटो मोदी भएको साइडतर्फ पुगिन्, जसका कारण उनको पोजिसन चेन्ज भयो।
सामाजिक सञ्जालहरुमा उनको पोजिसनलाई लिएर आलोचना भएको छ। त्यसो त उनले हाँत बाँधेर बसेको विषयलाई लिएर पनि आलोचना भएको छ।